Nidaam-dowladeed ceynkee ah baa ku haboon dalkeenna Soomaaliya ? | Saadaal Media
Nidaam-dowladeed ceynkee ah baa ku haboon dalkeenna Soomaaliya ?
Apr 8, 2017 - jawaab
Inta aanan ka waramin nooca nidaam-dowladeed ee ku haboon dalkeenna Soomaaliya ee ay waayadani qataraha badani kaga soo fool leeyihiin Shisheeyaha isugu jira cadaanka iyo madowga ee u soo qalabqaatay boobka kheyraadkeena. Aan marka hore ka hadlo labo arimood oo aad u muhiimsan, Kuwaasi oo kala ah: Canbaareyn aan u jeedinayo Baarlamaanka Federaaliga oo si indho la’aan ah u ansixyey xukuumad tiro badan oo aan loo baahneyn, iyo soo gudbin ku aaddan halbeegga aan Anigu wax ku cabiro marka aan wax taxliilinayo.
Talaabada ay qaadeen Xubnaha Baarlamaanka, Waxa ay muujineysaa inayan si fiican u aqrinin fariimaha ka imaanayey dadweynaha Soomaaliyeed ee sharafta badan, Kuwaasi oo ku qotomey in markan loo baahan yahay isbadal dhab ah oo wax ka badala xaaladaha siyaasadeed, kuwa dhaqaale, kuwa amni iyo waliba kuwa bulshe ee ka jira dalkeena. Fariimahan, Ayaa sidoo kale ku qotomay inayan dowladnimadu noqonin goob laga faafiyo dhaqamada xun xun ee lidiga ku ah diinteena Islaamka iyo dhaqankeena suuban.
Anigu, Waxaan qabaa in dalkan uu u baahan yahay nidaam dowladeed adkeyn kara midnimadiisa, madaxbanaanidiisa iyo waliba haykalkiisa dowladnimo, Iyadoo aan waxba loo dhimeynin sharafka iyo xoriyaddda qofka Soomaaliga ah. kaasi oo hadana fudud hirgelintiisa, Islamarkaana aanu u baahneyn lakabyo badan oo isdulsaaran oo dhinaca maamulka ah sida nidaamka federaalismka oo kale.
Tusaale ahaan, Nidaamkani waxa uu fududeynayaa in Wasiirka Arimaha Gudaha iyo shaqaalaha hoos yimaada wasaaraddiisa ee ku sugan tuulo ku taallo xuduudda dalka ay si deg deg ah u kala warqaataan, Iyadoo aan waqti badan lumin, halka maanta taasi aysan suurtagal ahayn sababo la xariira nidaamka federaalka ee khabiithka ah. Taasina waxaa daliil u ah booqashadii sharcidarada ahayd ee uu dalka ku soo galay Uhuru Kenyaata iyo waliba shisheeyaha la midka ah ee dalka soo gala, Iyadoo aysan cidin la soconin.
Ma xaq baa in maamul goboleed uu heshiis caalami ah la galo dowlad shisheeye, Iyadoo ay dalka ka jirto Dowlad Dhexe oo la aqoonsan yahay, Islamarkaana ay kuwada jiraa dhamaan dadka Soomaaliyeed ? Mase la aqbali karaa in maamul beeleed uu ku tagrifalo ama uu kireeyo hanti ka dhaxeysa dhammaan dadka Soomaaliyeed ? Yaase lahaa lacagihii lagu dhisay dekadahan la iibinayo ?
TOOS U DAAWO:-Siyaasiga Faarax Macalin oo horay u soo noqday Guddoomiye kuxigeenka Baarlamaanka Kenya oo Imaaraadka Carabta ku tilmaamay cadawga Soomaaliya
Siyaasiga Faarax Macalin oo horay u soo noqday Guddoomiye kuxigeenka Baarlamaanka Kenya ayaa Imaaraadka ...
DAAWO SAWIRO:-Ra’iisal wasaare ku xigeenka soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha Dawladda Qadar u fadhiya Soomaaliya
Ra’iisal wasaare ku xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), ayaa maanta ...
Sarkaal ka tirsan Daacishta ka dagaalanta Puntland oo lagu qabtay Muqdisho
Caasimada soomaaliya ee muqdisho ayaa lagu qabtay Sarkaal ka tirsan Daacish kaasoo la sheegay ...